Izinkampani Zempahla Yomthengi Ezihlanganisiwe Zisebenzisa Kanjani Idatha Enkulu? | Martech Zone
Izinkampani Zempahla Yomthengi Ezihlanganisiwe Zisebenzisa Kanjani Idatha Enkulu?
NgoLwesithathu, Juni 12, 2019 NgoLwesithathu, Juni 12, 2019 Douglas Karr
Uma bekukhona imboni eyodwa lapho ithoni ledatha belithwalwa ngokuqhubekayo, lisembonini ye-Consumer Packaged Goods (CPG). Izinkampani ze-CPG ziyazi ukuthi iBig Data ibalulekile, kepha kusamele bayamukele emsebenzini wabo wansuku zonke.
Ziyini Izimpahla Ezihlanganisiwe Zomthengi?
Izimpahla ezihlanganisiwe zabathengi (i-CPG) yizinto ezisetshenziswa nsuku zonke ngabathengi abaphakathi abadinga ukushintshwa okujwayelekile noma ukugcwaliswa kabusha, njengokudla, iziphuzo, izingubo, ugwayi, izimonyo, nemikhiqizo yasendlini.
Ngokusho kweBedrock Analytics, i- izimpahla ezihlanganisiwe zabathengi imboni ilinganiselwa ukuthi ikhiqiza ngaphezu kwama- $ 2 trillion minyaka yonke e-United States kuphela. Kunezinkulungwane zabakhiqizi be-CPG abazama ukuthengisa amashumi ezinkulungwane zemikhiqizo, kanye namakhulu ezinkulungwane zezinto kubathengisi abakhulu abacishe babe ngama-300. Eqinisweni, abathengisi abaphezulu abahlanu abathengisayo bavame ukwakha ngaphezu kwengxenye ekuthengisweni kwayo okuphelele.
Abathengisi bafuna imininingwane ethe xaxa, ukuqonda nokuqondiswa kusuka kubakhiqizi ukuze bathuthukise okunezinhlobonhlobo zomkhiqizo futhi bandise ukuthengiswa kuzo zonke izigaba zomkhiqizo. Ngenkathi abakhiqizi abakhulu be-CPG benezinsiza ezisendlini zokuletha le mininingwane, abakhiqizi abaningi abancane nabaphakathi nendawo abanayo.
Izibalo zeBedrock isiza abakhiqizi be-CPG ukuthi basebenzise amandla e-data analytics ukushayela ukukhula nokuwina isikhala seshalofu. Ithimba lalikhona lalifuna ukwazi ukuthi ochwepheshe be-CPG bayisebenzisa kanjani futhi bayisebenzisa kanjani idatha abanayo.
Imininingwane ibalulekile ezinkampanini ze-CPG ukwenza izinqumo eziphumelelayo. Iqiniso ukuthi amaphesenti amakhulu wabakhiqizi be-CPG aqhubeka nokulwa nezibalo zedatha. Leso yisidingo esicindezelayo uBedrock azoqhubeka nokusinakekela - ngocwaningo olunje, nangokusebenzisa ipulatifomu yethu ye-AI enikwe amandla idatha.
Ingabe uSalcido, isikhulu esiphezulu seBedrock Analytics
Kuyathakazelisa ukuthi lolu cwaningo lukhombisa ukuthi iningi lezinhlangano ze-CPG ziyakwazi ukufinyelela kwimininingwane, kepha azinayo induduzo encane ekusabalaliseni imininingwane ibe yimiphumela engenzeka. Lokhu kuyishwa, ngoba leyo datha ibaluleke kakhulu ezinqumweni eziningi zangaphakathi, kufaka phakathi:
Ukumaketha kanye neBranding
Ukwethula Imininingwane Kubathengi
Kwethulwa imininingwane kubaphathi
Bahlolisise ukukhethwa kochwepheshe be-CPG, futhi bakha imiphumela yocwaningo kule infographic elula futhi ekhanyayo.
Tags: ama-bedrock analyticsizimpahla ezihlanganisiwe zabathengimarketingUkukhushulwa
Hlanganisa Isihleli Sakho Sevidiyo Kokukodwa Kwakho Ngokuvumelanisa Umsindo
I-Duet: Sebenzisa i-iPad yakho njenge-Monitor Eyengeziwe